Egwú maka Ụbọchị Nne bụ ndị okenye, ụmụaka, oge a maka ndị nọ n'afọ iri na ụma na ụmụ akwụkwọ kọleji. Okwu na okwu banyere nne
Ndị ọzọ Ememe
Egwú maka Ụbọchị Nne: ụmụaka, ndị okenye, oge a maka ndị nọ n'afọ iri na ụma. Okwu na nwa nwanyi banyere nne
A na-eme ememe Ụbọchị mama m n'ọtụtụ mba gburugburu ụwa: ebe ọ bụ na oge opupu ihe ubi, ebe na ụbịa, ebe n'etiti okpomọkụ. Kwa nke ọ bụla nwere ụbọchị zuru ezu n'afọ, nke a chọrọ maka ngosipụta mkpokọta nke otuto, nkwanye ùgwù na ekele nye ndị nne dị ugbu a na ndị na-abịa n'ọdịnihu. Na USA, Malta, Denmark, Germany, Japan, Australia, Ukraine, a na-eme ememe ahụ na Sunday nke abụọ na May. Na Gris, ha na-arara nne na nna ha nye 9 May. Na Belarus, ezumike a na-egbuke egbuke dara na October 14. Anyị nwere ala nnabata na Russia - nke ikpeazụ ụbịa Sunday. N'ụbọchị a, onye ọ bụla na-eji ọkụ ọkụ na-ekele nne ha na-enwu gbaa bouquet, nye ya ezigbo mma, hug, ekele na isusu ọnụ. N'ebe ọha na eze, na redio na telivishọn, abụ abụ n'eziokwu maka ụda mama m. Ndị ọchịchị obodo na-agba ọsọ na-ekwu okwu n'olu dara ụda na square ma ọ bụ n'ụlọ omenala. Ndị mmadụ niile na-ekwupụta ihe ndị a na-adịghị edozi anya maka afọ ahụ dum. Ma ọnọdụ kacha mma maka ezumike ahụ bụ maka abụ ochie na nke oge a banyere nne maka ụmụaka, ndị na-eto eto na ndị okenye. Ihe ederede ha na ịhụnanya nne m, nlekọta ya, ndidi na nraranye onwe ya. Ha na-emetụ mkpịsị ihe nzuzo nke mkpụrụ obi, na-eme ka ndị na-agba ọsọ na anya mmiri nke ọṅụ ... ma ọ bụ mwute. Onye ọ bụla nke ya!
Mara mma maka mama na Ụbọchị Nne (gee egwú na okwu)
Ruo ọtụtụ narị afọ, ndị na-ese ihe a na-eme n'ụwa a raara onwe ha nye ihe omume nke ndị nne na nna. Ndị a na-agụnye Petrov-Vodkin "Nne ara," "Camille Monet na nwatakịrị" Claude Monet, "Mama na nwa" Goodwin Kilburn. Ndị na-ede uri na ndị na-ede akwụkwọ na-agbaso ihe nlereanya ha, na-abụ abụ isi nke nwanyị ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, Nikolai Nekrasov, Agniya Barto, Ivan Bunin, Marina Tsvetaeva, Sergei Yesenin. Emela ihe n'azụ ndị na-egwu egwu na ndị na-ede uri. Taa, n'ụwa a, e nwere ọtụtụ narị abụ mara mma banyere mama m, nke anyị na-echeta ma na-ege ntị n'ụbọchị a dị ebube. Ọ bụlarị ezumike dị n'akụkụ nkuku. Họrọ otu ihe na-emetụ n'ahụ ma rara ya nye onye amaala gị. Ọmarịcha egwu ga-eme ka obi na-atọ gị ụtọ. N'elu osimiri ahụ, ihu igwe na-adịghị mma, n'azụ mmiri na-asọ mmiri, Behind a cold fog where the sun rises. Naanị nne m isi awọ, nne m hụrụ n'anya, na-eche maka nwa ya nwanyị na ihe owuwu ụzọ mbata ya. Naanị nne m isi awọ, nne m hụrụ n'anya, na-eche maka nwa ya nwanyị na ihe owuwu ụzọ mbata ya. M ga-abịakwute gị, mama m, m ga-asusu gị wrinkles. Ka afọ na-aga site na isi ike, naanị gị, mama m, dị ndụ. Ụmụaka na-agbapụ, ọ na-emekarị, Onye dị n'ebe ndịda, onye dị n'ebe ọdịda anyanwụ, ọtụtụ ihe na nchegbu. Naanị nne m na-echeta ihe niile, mama m anaghị echefu ya. N'ụbọchị ụbọchị ọmụmụ gị, ọ ga-ezigara ekwentị. Naanị nne m na-echeta ihe niile, mama m anaghị echefu ya. N'ụbọchị ụbọchị ọmụmụ gị, ọ ga-ezigara ekwentị. A ga-enwe ọrụ mgbe nile, a ga-enwe nsogbu mgbe nile, na nchịkọta na-arụ ọrụ na okwu efu. Naanị nne m adịghị adị ebighi ebi, ị ghọtara nke a ozugbo, Ị ghọtara nke a tupu mama dị ndụ. Naanị nne m adịghị adị ebighi ebi, ị ghọtara nke a ozugbo, Ị ghọtara nke a tupu mama dị ndụ.
Ezigbo egwu banyere nne ruo Ụbọchị Nne (ederede na egwu)
Mmasị, ịhụnanya na obi ụtọ banyere mama m - ihe kacha emetụ n'ahụ nne m hụrụ n'anya n'ụbọchị mama m. Ọ bụ ihe ndị a dị egwu nke pụrụ ịkwa ákwá n'eziokwu ma nye oge dị ụtọ nke obi ụtọ, ọṅụ na obi ụtọ. Ịdị jụụ na abụ dị mma, na-akụziri ndị nne na nna gị hụrụ n'anya, ga-enyere gị aka igosipụta mmetụta kachasị obi nke ịhụnanya, ekele na nkwanye ùgwù maka onye kachasị mkpa ná ndụ. Okwu a "nne" na-adaba ngwa ngwa n'otu asụsụ n'asụsụ niile nke ụwa, ndị inyom a na-edo onwe ha n'okpuru ndị nwere ọgụgụ isi, ha nwere aka kachasị mma ma na-emeghe obi mgbe nile. Abụ ọma ndị nwere obi ụtọ na ụmụ ha na-abụ abụ bụ onyinye kasị mma n'ụwa! Ị ga-eteta m n'ehihie. M ga-emetụ ntutu isi gị aka. Dị ka mgbe niile, ịchọrọ ịchutu ọnụ. Na ịmụmụ ọnụ ọchị ga-ekpo m ọkụ. Mgbe ị nọ nso m na-ekpo ọkụ. Na obi dị jụụ, na ìhè. Na ụwa dum, naanị anyị na mụ. M na-abụkwa abụ banyere ya, abụ m mama m. Nne m kacha mma n'ụwa. Ọ ka m dị ka anyanwụ na ndụ na-enwu. Mama m bụ ezigbo enyi n'ụwa. Otú m si hụ mmasi aka ya n'anya. Nne m kacha mma n'ụwa. Ọ ka m dị ka anyanwụ na ndụ na-enwu. Mama m bụ ezigbo enyi n'ụwa. Otú m si hụ mmasi aka ya n'anya. Mama, nne, nne m. Mama, nne, nne m. Ị ga-aghọta ma gbaghara ihe niile. Amaara m na ị gaghị ehi ụra n'abalị. N'ihi na ị hụrụ m n'anya. N'ihi na nwa m nwanyi. Mgbe ị nọ nso m na-ekpo ọkụ. Na obi dị jụụ, na ìhè. Na ụwa dum, naanị anyị na mụ. M na-abụkwa abụ banyere ya, abụ m mama m. Nne m kacha mma n'ụwa. Ọ ka m dị ka anyanwụ na ndụ na-enwu. Mama m bụ ezigbo enyi n'ụwa. Otú m si hụ mmasi aka ya n'anya. Nne m kacha mma n'ụwa. Ọ ka m dị ka anyanwụ na ndụ na-enwu. Mama m bụ ezigbo enyi n'ụwa. Otú m si hụ mmasi aka ya n'anya. Mama, nne, nne m. Mama, nne, nne m.
Egwu egwu maka Ụbọchị Nne Maka Ụmụaka (video na ederede)
Ndị obere bi na mba anyị, ndị na-eri kwa ụbọchị na semolina porridge, na-akpọ ụmụ bebi ma na-amụta nọmba, na-ewetakwa abụ ọchị ha na ụbọchị mama m site na ụmụaka. N'agbanyeghị obere oge, ụmụaka ga-enwe obi ụtọ itinye ihe kachasị mkpa, nwa nwoke ọ hụrụ n'anya ma hụ n'anya nke ọma. Kwe ka o buru onye nzuzu na ihe di nma, ma n'eji obi ya nile dee ya. Ihe egwu dị iche iche n'ụbọchị Ụbọchị nne maka ụmụaka ka mma ịchọta n'ọdịnihu, ka oge na-aga iji mụta ihe edere ma jiri nlezianya kọgharịa ọrụ ahụ. Mama bụ okwu mbụ, okwu bụ isi na ihe ọ bụla. Nne m nyere m ndụ, ụwa nyere m na gị. Ọ na - eme, n'abalị na - ehi ụra, Mama m ga - eti mkpu, sị, Dịka e nwere nwa nwanyị, lee nwa ya nwoke, Naanị ụtụtụ mama m ga - ehi ụra. Mama bụ okwu mbụ, okwu bụ isi na ihe ọ bụla. Nne m nyere m ndụ, ụwa nyere m na gị. Nne na uwa na anyanwu, Ndụ nyere m na gi. Ọ na - eme, ma ọ bụrụ na ọ na - eme na mberede, N'ụlọ gị, nsogbu, mama, ezigbo enyi gị, ga - anọnyere gị. Mama bụ okwu mbụ, okwu bụ isi na ihe ọ bụla. Nne m nyere m ndụ, ụwa nyere m na gị. Nne na uwa na anyanwu, Ndụ nyere m na gi. Ọ na-eme, ị ga-etolite, dịkwa ka nnụnụ, ị ga-efe elu. Onye ọ bụla ị bụ, mara na maka nne gị, Dịka ọ dị na mbụ, nwa m hụrụ n'anya. Mama bụ okwu mbụ, okwu bụ isi na ihe ọ bụla. Nne m nyere m ndụ, ụwa nyere m na gị.
Abụ ndị a na-abụ n'oge a maka ndị nọ n'afọ iri na ụma na Ụbọchị Nne
Abụ egwu nke oge a maka ndị nọ n'afọ iri na ụma na Ụbọchị Nne m dị iche na ụdị egwú egwu dị egwu. Ha bụ ndị na-adịghị egwu na mmetụta uche, ma ha nwere ezi obi na ezi. Egwú maka mama m - nke a bụ ohere kachasị mma ịkọrọ ya mmetụta na mmetụta uche ndị ahụ, nke siri ike ikwu okwu, ịbụ onye na-eto eto na-ekwenye ekwenye. Ya mere, mgbe m nọ n'ọnụ ụzọ - m na-amụmụ ọnụ ọchị, na-amụmụ ọnụ ọchị, dị ka Chineke. Oh, onye nwere ike, m kọwara na mbụ: Mama ahụ, naanị mama m nwere ike ịhụ n'anya! Kedu ka m ga esi esi agbaghara, olee ka m kwesịrị isi mee? Mama, gbaghara m, obere nwa-anụ ọkụ n'obi. Mama, Mama, mama m - ya adighi adighi nma, nke a adighi nma; Gwọọ ọnyá m ... Mama. Gwa m ugbu a, mama m. Ogologo oge ole ka anyị ji obi gị kwurịta okwu? M na-achụ ihe niile, mana m na-eme ngwa ngwa ibi ndụ ... Ma cheta, ị gwara m, mama m, "agbala ọsọ!" Kedu ka m ga esi esi agbaghara, olee ka m kwesịrị isi mee? Mama, gbaghara m, obere nwa-anụ ọkụ n'obi. Mama, Mama, mama m - ya adighi adighi nma, nke a adighi nma; Gwọọ ọnyá m ... Mama. Oh, mama m, agbaghara m, obere nwa m na-anụ ọkụ n'obi. Mama, Mama, mama m - ya adighi adighi nma, nke a adighi nma; Gwọọ ọnyá m ... Mama.
Abụ kacha mma maka oge a maka ụmụ akwụkwọ kọleji maka Ụbọchị Nne
Ụmụ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ sekọndrị n'oge a, n'agbanyeghị na ha nwere ahụ iru ala ma ọ bụ ịpụpụ ha, ọ na-esiri ha ike ịchọta okwu kwesịrị ekwesị igosipụta ịhụnanya ha na nraranye ha. Karịsịa ndị na-ebute ọnọdụ kachasị mkpa ma dị mkpa ná ndụ ha. Abụ ọma kachasị mma nke oge a ga-enyere ụmụ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ sekọndrị ekele ndị mụrụ ha n'ụlọ ma ọ bụ na egwu egwu ụlọ akwụkwọ. Ngwá egwu dị egwu na-emejupụta obi nke ndị na-emerụ ahụ mmeri ahụ na obi ụtọ na ọṅụ. Enwere ike ịchọta egwu kachasị mma maka ụmụ akwụkwọ ụmụ oge na Ụbọchị Nne na ndekọ nke ọtụtụ kpakpando taa: Kati Humeniuk, Alina Burachevskaya, Renata Shtifel, Utah, Victoria Lanevskaya, Nastya Godunova, wdg. Mana kachasị obiọma na ezi obi anyị ahọrọlarị gị kpọmkwem. Mama m, m hụrụ gị n'anya, maka mmadụ nile, enwere m mwute maka oge ọ bụla ị hụrụ n'anya, ị ga - enwe obi ụtọ na m mgbe niile, mama m, m ga - agbasi mbọ ike ime onwe m ka ọ dị mma, akwala ákwá, m nnukwu, na - adabere na gram. Anọ m akwa ákwá, Mama m, na mpempe akwụkwọ m ka m bụ otu, mama m, na mama m, m hụrụ gị n'anya, mama m, agaghị m arahụ gị, Mama, ana m arịọ gị ka ị ghara ikwere, Mama, asụsụ ọjọọ. gbalịa ime onwe gị ka ị ghara ịkwa ákwá Ịkwa ákwá na m bụ nnukwu, dobe ka a gram Olee otú ị si bụrụ otu ike, mama Emela mkpu na m nnukwu, na dobe ka gram Ma olee otú i na m na otu nne
Egwuregwu ndị okenye banyere mama na mama mama (okwu na egwu)
N'ụbọchị Nne, ị nwere ikelele ụmụ nwanyị nke ala nke nwere nri dị ụtọ nke okooko osisi okooko osisi okooko osisi, onyinye ihe atụ, ihe eji aka ma ọ bụ aka nri nke balloons. Ịnwere ike ịnye onye nne na nna tozuru etozu okenye okwu banyere nne nwere mmetụta miri emi, okwu obiọma na ederede unobtrusive. Onyinye dị otú ahụ ga-eme ka nwa amaala nwee mmetụta nke dị mkpa ma dị mkpa. Egwuregwu ndị okenye banyere mama na ụbọchị mama m, n'adịghị ka abụ pop, na-emetụtakarị oge dị mwute ma na-ewute onwe ha, na-eme ka mmetụta dị omimi, mee ka anya mmiri ma ọ bụ ọṅụ. Ka o sina dị, na ezumike nke ụbụrụ nile, ha bụ ndị a ma ama dị ka ihe nlekọta pụrụ iche ma ọ bụ onyinye pụrụ iche. N'etiti etiti abalị ka ị na-abụ abụ nye m Ma m na-achị gị ọchị na nrọ Ezumike igwe na-ama jijiji na aka Na nso anyị na-eburu anyị oge mama mama m na-enweghị gị na-eche mama m mgbe m na-aga na ụgbọ oloko izute mama m ka ọ na-ewute m n'ejighị ọkụ gị N'elu onyinyo nke nnukwu agba mmiri nke anya mmiri ụmụ Mgbe m baara m mba maka ịsọ egwu ma dị njọ Ighaara m ma gbaghara mgbaghara anaghị ajụ Gịnị ka m nwere ọmịiko na m bụ n'oge ahụ bụ mama m ma ọ bụrụ na ị naghị ahapụ mama m mgbe m na-aga ma na-ezute m na Mama m na-enwe mwute na enweghị m aka aka gị mgbe ụfọdụ ụjọ na-atụ m na n'ime obi m Ana m ekwu na m ga-alaghachi N'afọ ndị ahụ Amaara m ihe niile m ga - enye Ka m soro gị ruo mgbe ebighị ebi ma ruo mgbe ebighị ebi Mama m na - enweghị gị na - eche M mama m anya mgbe m na - aga ma na - akwọta mama m na - Oge nne bụ ụzọ dị mma isi keleta ebe ị mụrụ na tebụl oriri, na ihe nkiri egwu ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ matinee ụlọ akwụkwọ ọta akara. Enwere ike ịchọta abụ kachasị ochie na nke oge a banyere nne maka ụmụaka, ndị nọ n'afọ iri na ụma, ụmụ akwụkwọ kọleji na ndị okenye na ibe anyị ọnụ ụzọ anyị tinyere vidio, okwu na akụkụ Akwụkwọ Nsọ.
Ihe ị ga-enye maka mama ọhụrụ na mama, afọ enyi maọbụ enyi nwanyị, enyi nne, enyi nwanyị, ndị nkụzi. Ihe kachasị mma nke onyinye afọ ọhụrụ nye ndị nne na nna, ezinụlọ, ụmụ nwoke
Ọbịbịa nke Onyenwe anyị 2016: akụkọ banyere ezumike, ọdịnala, ememe, akara ngosi. Gini ka apughi ime maka Ascension nke Onyenwe anyi? Kedu ụbọchị ezumike Ọtọdọks na 2016?
Ihe atụ maka Pancake Day 2017 n'ụlọ akwụkwọ, ụlọ akwụkwọ ọta akara na n'okporo ámá maka afọ niile - Egwuregwu na asọmpi maka ememme maka Shrovetide Maslenitsa
N'ihe ngosi nke Nne Mary Mary Ngọzi - olee ụbọchị 2016 bụ ụbọchị. Akụkọ, ihe ịrịba ama na ekpere maka ezumike ụka
Ezigbo SMS na nkwụ na Sunday na amaokwu. Ekele mbụ na ụdị sms na Palm Sunday
Ụbọchị Valentine 2016: ihe iji nye nwa okorobịa / nwa agbọghọ? Echiche na ekele
Onyinye maka Ụbọchị Onye Nkụzi site na ụmụ akwụkwọ - ihe ọhụrụ, nke mbụ na mmefu ego
Vinyl - oge oyi: otu esi eji akwa
Courgettes na igwe mmiri ọkụ abụọ
Achịcha lemon lemon
Njirimara bara uru nke ghee
Ozi gbasara pelargonium. Aro maka mmeputakwa na ilekọta
Nyere onwe gị aka site na nsọ nsọ na ịmalite ịmalite
Nkwupụta okwu - iwu nke nkwurịta okwu ziri ezi
Ihe nzuzo nke ịma mma site gburugburu ụwa
Kedu otu esi eji nwatakiri n'ọdịnihu ekwurịta okwu n'ụzọ ziri ezi?
Otu esi amalite ibi ndu
Otu esi acho Ivan tii. Atụmatụ maka owuwe ihe ubi, ihicha, na-agba ume ma na-ekwenye Ivan-tii n'ụlọ
Ihe oriri "Lesenka"
Otu esi achichapu akpụkpọ anụ ahụ site n'enyemaka nke usoro usoro ihe gbasara mbara igwe
Vases n'ime ime: Atụmatụ maka ndị na-emepụta ihe
Ọgwụgwọ na magburu onwe Njirimara nke rhodochrosite
Otu esi kụziere nwatakịrị ka o kwuo site na foto